Troubleshoot Steam Games na Nvidia ọkwọ ụgbọala | Site na Linux
Steam batara na Linux iji mepee uzo iji mee ka onu ogugu di elu enwere ike ịgba ọsọ na sistemụ ọ bụghị naanị na ntọhapụ nke egwuregwu nke dakọtara na ikpo okwu ma ọ bụrụ na ọ bụghị na nsonye nke ọrụ Proton, nke na-agbakwunye ikike ịme egwuregwu ndị dabara na Windows na Linux.
N'agbanyeghị ihe a niile, onye ahịa Steam nwere nsogbu ụfọdụ na-egwu ụfọdụ egwuregwu na Linux na kaadị Nvidia. Ndị a abụghị nsogbu siri ike ebe ọ bụ na ọ bụ ihe niile n'ihi na egwuregwu ụfọdụ nwere nsogbu ma ọ bụrụ na sistemụ arụmọrụ ha arụnyere enweghị ọ́bá akwụkwọ ọbá akwụkwọ 32-bit.
Na, ọ bụ ezie na ngwa Steam bụ 64-bit, ọtụtụ n'ime egwuregwu vidio na Steam ụlọ ahịa ha anaghị arụ ọrụ na 64 ibe n'ibe. Kama nke ahụ, ha na-atụkwasị obi na ọbá akwụkwọ ọfụma 32-bit ochie iji rụọ ọrụ nke ọma.
Iji dozie nke a, anyị nwere ike ịmalite site na ịwụnye ọbá akwụkwọ 32-bit na usoro. Anyị nwere ike ime nke a site na ịmepe ọnụ na nke anyị ga-pịnye iwu ndị a.
Maka ndị na-eji Ubuntu ma ọ bụ nkesa na-adabere na ya, ka gbakwunye ihe nchekwa ndị a:
Anyị ga-aga menu wee chọọ "Sọftụwia na mmelite" ma ọ bụ site na ọnụ anyị nwere ike mepee ya:
N'ebe a, anyị ga-achọ "Ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ" ma gbanwee site na onye ọkwọ ụgbọ ala Nvidia na-agba ugbu a gaa na otu na ndepụta nke dị ọhụrụ.
Ugbu a, maka ndị na-eji Debian, na ọnụ anyị ga-ebuli ihe ùgwù na:
Anyị ga-abanye na ọdụ:
Mgbe n'ihi na ndị bụ Arch Linux ọrụ ma ọ bụ ụfọdụ emepụta na nke aI kwesịrị ịma na Arch Linux obodo na-arụ nnukwu ọrụ nke ịnye ndị ọrụ ngwaọrụ iji hazie ọba akwụkwọ eserese 32-bit iji mee Steam ọrụ kacha mma.
Iji mee nke a, anyị ga-emeghe ọnụ na pịnye:
Okwu Fedora, E nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche iji nweta ọba akwụkwọ dị mkpa iji kwụsị nsogbu dị iche iche Steam.
Maka nke a, anyị ga-akwado RPM Fusion repository, nke enyere ya aka n'ụzọ dị mfe site na ụdị nkesa kachasị ọhụrụ.
Ugbu a, na ọnụ anyị ga-pịnye iwu na-esonụ:
Ma mgbe ahụ, anyị ga-ahazi ọbá akwụkwọ 32-bit site na ịwụnye ngwugwu:
Ọ bụrụ na ịwụnye ọbá akwụkwọ 32-bit na sistemụ gị arụghị ọrụ, i nwere ike iji nke a ọzọ usoro.
Kedu mejupụtara iwepu ngwa gị na Steam ma degharịa ya, mana iji ụdị Flatpak.
Ebe ọ bụ na mgbe arụnyere Steam na Flatpak, a na-etinyekwa ọba akwụkwọ Nvidia niile na-akpaghị aka site na usoro Flatpak, na-ahụ na egwuregwu niile na-aga nke ọma.
Iji wụnye ụdị Flatpak Steam, ha ga-ebu ụzọ gbakwunye nkwado Flatpak gị usoro, ị nwere ike ime nke a site na iji kọmputa ede otu n'ime ndị na-esonụ iwu na ọnụ.
Debian, Ubuntu ma obu ndi ozo nke ndia:
Maka ikpe nke ụdị ọ bụla nke OpenSUSE:
Mgbe maka ndị na-eji Arch Linux ma ọ bụ nkesa ewepụtara nke a:
Maka ndị ọrụ Fedora, ha ekwesịghị ichegbu onwe ha gbasara ịgbakwunye nkwado ka ọ na-arụ ọrụ na ndabara na sistemụ ahụ.
Ugbua site na nkwado agbakwunyere, ugbu a, anyị ga-pịnye iwu ndị a inwe ike ịwụnye Steam site na flatpak na usoro ahụ:
Ozugbo echichi ahụ zuru ezu, anyị ga-abanyeghachi na Steam wee budata egwuregwu ndị kwesịrị ịgba ọsọ ugbu a na sistemụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Troubleshoot Steam Games na ndị Nvidia ọkwọ ụgbọala